Ambassador Harry Thomas Jnr
NKUNZI, TSHOLOTSHO —
Vachitaura kuvatori venhau mushure mekushanyira zvimwe zvirongwa zviri kutsigirwa nesangano reUSAID kuNkunzi kuTsholotsho, Ambassador Thomas vati vanofara kuti nyika yavo ndiyo inopa rubatsiro rwakakura kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose pasi rose.
Vati izvi zvinoratidza kuzvipira kwakaita vanhu vemuAmerica mukubatsira vanhu vemuZimbabwe vakati muzinda wavo unoshuvirawo kuti kudyidzana pakati peAmerica neZimbabwe mune zvemabhizimisi nezvekutengeserana kukure.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei muzinda wavo wakabvuma kupa magwaro ekufambisa kuvanhu vakawanda vakaperekedza mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, VaThomas vati pasi pemiteno yekudyidzana pakati penyika, havakwanise kupindira panyaya dzehuwandu hwevanhu vanenge vanzi nehurumende vari kuenda kumusangano wakadaro.
Ambassador Thomas, avo vange vachiperekedzwa nevamwe vakuru vakuru vesangano reUSAID pamwe nereCreating New Frontiers in Agriculture, vashanyira chirongwa chekupa chikafu kumadzimai akazvitakura pamwe nevana vari pakati pemwedzi mitanhatu nemakore maviri paNkunzi Clinic kuTsholotsho.
Vashanyirawo madzimai pamwe nevarume vari kuita chirongwa cheThuthukani Village Savings and Lending Group chekuchengeta nekukweretesana mari pamwe nekudzidza nekuchengeta zvipfuyo uye chimwe chekudzidzisa zvehutsanana pasi pezvikwata zvinonzi Community Health Clubs
Zvirongwa izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chinoziikanwa kunzi Amalima chinotsigirwa neUSAID neCreating New Frontiers in Agriculture.
Muzvare Ntombiyenhle Ncube, avo vane mwana ane gore nemwedzi mina, ndemumwe wemadzimai vane mwana ari muchirongwa chekupiwa chikafu, uye vaipiwavo chikafu pavaive vane pamuviri. Vati chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti chinobatsira kuti vanamai pamwe nevana vave nehutano hwakanaka.
Mukuru wezvehutano nekudya kwakanaka musangano reAmalima, Amai Pamela Ncube, vati zvirongwa zvavo zvinokurudzirawo vagari kuti vachengetedze hutano nekuita zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira kuvaka zvimbuzi pamisha yavo.
Chirongwa cheAmalima chiri kuitwa kuTsholotsho, muMatabeleland North pamwe nekuBulilima, Gwanda neMangwe kuMatabeleland South uye chinotarisirwa kupedzwa gore rinouya.